24 Na nnawɔtwe no da a edi kan no, wɔde ohuam a wɔasiesie no yɛɛ ntɛm kɔɔ ɔda no so.+ 2 Nanso wohui sɛ wɔamunum ɔbo no afi ɔda no ano,+ 3 na bere a wɔkɔɔ mu no, wɔanhu Awurade Yesu amu no.+ 4 Bere a wɔn tirim ayɛ wɔn keserenee no, hwɛ! mmarima baanu a wɔhyehyɛ ntade hyɛnn begyinaa wɔn nkyɛn.+ 5 Bere a ehu aka mmea no na wɔasisi wɔn ti ase no, mmarima no ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na morehwehwɛ Nea ɔte ase no wɔ awufo mu? 6 [[Onni ha, na mmom wɔanyan no.]]+ Monkae nea ɔka kyerɛɛ mo bere a na ɔda so wɔ Galilea no,+ 7 sɛ etwa sɛ woyi onipa Ba no hyɛ abɔnefo nsa na wɔbɔ no asɛndua mu na da a ɛto so abiɛsa no wasɔre.”+ 8 Enti wɔkaee ne nsɛm no,+ 9 na wɔsan fii ɔda no so de eyinom nyinaa ho amanneɛ kɔmaa dubiako no ne wɔn a aka no nyinaa.+ 10 Ná ɛyɛ Maria Magdalene, ne Yoana,+ ne Yakobo maame Maria. Afei nso, mmea a aka+ a wɔka wɔn ho no kaa eyinom kyerɛɛ asomafo no. 11 Nanso, nsɛm yi yɛɛ wɔn sɛ nsɛnhunu bi, na wɔannye mmea no anni.+ 12 [[Na Petro sɔre tuu mmirika kɔɔ ɔda no so, na ɔbɔɔ ne mu ase no, ohuu nwera no nkutoo. Enti ofii hɔ kɔe, a nea asi no ama ne ho adwiriw no.]] 13 Na hwɛ! da no ara na wɔn mu baanu rekɔ Emaus a ɛyɛ akuraa bi a efi hɔ kɔ Yerusalem bɛyɛ akwansin ason, 14 na na wɔrebɔ nea asi no nyinaa+ ho nkɔmmɔ. 15 Bere a wɔrebɔ nkɔmmɔ na wɔresusuw ho no, Yesu ankasa bɛtoo+ wɔn na ɔne wɔn bɔɔ anan nantewee; 16 nanso wɔanhu sɛ ɛyɛ ɔno.+ 17 Obisaa wɔn sɛ: “Dɛn asɛm na monam kwan so resusuw ho yi?” Na wogyinae a wɔn anim ayɛ bosaa. 18 Wɔn mu biako a ne din de Kleopa bua see no sɛ: “Wo nkutoo na wote Yerusalem a woyɛ ɔhɔho a enti wunnim asɛm a asi hɔ nnansa yi?” 19 Na obisaa wɔn sɛ: “Asɛm bɛn?” Wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea ɛfa Nasareni+ Yesu, a ɔbɛyɛɛ odiyifo+ a ɔwɔ tumi wɔ nnwuma ne kasa mu wɔ Onyankopɔn ne ɔman no nyinaa anim no ho no, 20 ne sɛnea yɛn asɔfo mpanyin ne atumfoɔ no yii no mae ma wobuu no kumfɔ na wɔbɔɔ no asɛndua mu no.+ 21 Nanso na yɛwɔ anidaso sɛ saa ɔbarima yi na wɔayi no sɛ ommegye Israel;+ yiw, na eyinom nyinaa akyi no, ɛnnɛ ne da a ɛto so abiɛsa a nsɛm yi sisii. 22 Bio nso, mmea+ bi a wofi yɛn mu maa yɛn ho dwiriw yɛn, efisɛ wɔyɛɛ ntɛm kɔɔ ɔda no so 23 nanso wɔanhu n’amu no, na wɔbɛkae sɛ abɔfo yii wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn ma wɔaka sɛ ɔte ase. 24 Afei, wɔn a wɔne yɛn wɔ hɔ no binom kɔɔ ɔda+ no so; na wokohui sɛ ɛte saa, sɛnea mmea no bɛkae pɛpɛɛpɛ, nanso wɔanhu no.” 25 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “O mo a munni adwene na moyɛ nyaa mo komam sɛ mubegye nea adiyifo no kae nyinaa adi!+ 26 So na enhia sɛ Kristo no hu amane+ yi nyinaa na ɔkɔ n’anuonyam mu?”+ 27 Na ɔde fi Mose+ ne Adiyifo+ no nyinaa so kyerɛkyerɛɛ wɔn nsɛm a ɛfa ne ho mu wɔ Kyerɛwnsɛm no nyinaa mu. 28 Awiei koraa no, wɔbɛn akuraa a na wɔrekɔ ase no, na ɔyɛɛ te sɛ nea ɔretoa so akɔ n’anim. 29 Nanso wɔhyɛɛ no denneennen sɛ: “Tena yɛn nkyɛn, efisɛ ɛreyɛ adu anwummere na ade anya asa.” Enti ɔkɔtenaa wɔn nkyɛn. 30 Na ɔne wɔn te adidii no ɔfaa paanoo hyiraa so bubui, na ofii ase de maa wɔn.+ 31 Afei wɔn aniwa buebuei koraa ma wohui sɛ ɛyɛ ɔno; na ɔyera fii wɔn nkyɛn.+ 32 Na wɔkeka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Bere a ɔne yɛn rekasa wɔ ɔkwan so na ɔrekyerɛ Kyerɛwnsɛm no mu kyerɛ yɛn no, ampusuw yɛn koma anaa?” 33 Na dɔn no ara mu no, wɔsɔre san kɔɔ Yerusalem, na wokohuu dubiako no ne wɔn a wɔka wɔn ho no sɛ wɔahyiam, 34 reka sɛ: “Ampa, wɔanyan Awurade na oyii ne ho adi kyerɛɛ Simon!”+ 35 Afei wɔn ankasa nso kaa nsɛm a esii wɔ ɔkwan so ne sɛnea wɔnam paanoo bubu so huu no+ no ho asɛm. 36 Na wɔreka eyinom nyinaa ho asɛm no ɔno ankasa begyinaa wɔn mfinimfini [[ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Asomdwoe nka mo.”]] 37 Nanso esiane sɛ na ehu aka wɔn, na wosuro+ nti, wosusuwii sɛ wɔahu honhom bi. 38 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na moahaw, na dɛn nti na mo komam yɛ mo naa? 39 Monhwɛ me nsa ne me nan, na moahu sɛ ɛyɛ me ara; momfa mo nsa nso me mu+ nhwɛ, efisɛ honhom nni honam ne nnompe+ sɛnea muhu sɛ mewɔ yi.” 40 [[Na ɔkaa eyi no, ɔde ne nsa ne ne nan kyerɛɛ wɔn.]] 41 Nanso bere a anigye nti wonnye nni+ na asɛm no yɛ wɔn nwonwa no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “So mowɔ aduan bi wɔ hɔ?”+ 42 Na wɔmaa no apataa sin bi a wɔatoto;+ 43 na ogye dii+ wɔn anim. 44 Afei ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Eyi ne me nsɛm a meka kyerɛɛ mo bere a na meda so ka mo ho no,+ sɛ etwa sɛ nea wɔakyerɛw afa me ho wɔ Mose mmara ne Adiyifo+ no ne Nnwom+ no mu nyinaa ba mu.” 45 Afei obuee wɔn adwene mu yiye ma wɔtee Kyerɛwnsɛm no ase,+ 46 na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Saa kwan yi so na wɔakyerɛw sɛ Kristo no behu amane na da a ɛto so abiɛsa no wasɔre afi awufo mu,+ 47 na ne din so na wobegyina aka adwensakra a ɛma bɔne fafiri+ ho asɛm wɔ amanaman nyinaa mu+—wobefi ase afi Yerusalem;+ 48 mobɛyɛ nneɛma yi ho adansefo.+ 49 Na hwɛ! meresoma nea m’Agya ahyɛ ho bɔ no aba mo so. Mo de, montena kurow no mu nkosi sɛ wobefi soro ama mo tumi.”+ 50 Na ɔde wɔn fii adi dii wɔn anim kɔɔ Betania, na ɔmaa ne nsa so hyiraa wɔn.+ 51 Na ɔrehyira wɔn no ɔne wɔn ntam tetewee na wɔmaa no so kɔɔ soro.+ 52 Na wɔkotow no san de anigye kɛse baa Yerusalem.+ 53 Na wɔtenaa asɔrefie hɔ daa hyiraa Onyankopɔn.+